मिनदोर्जे थिङ तामाङ
फाल्गुण २८, २०७५ | जापान
जाडो मौसम अन्त्य संगै अब फुलहरुको राजा अर्थात साकुराको सिजन आउँदै छ । मौसम बिदहरुको भनाइ अनुसार यसपाली पोहोर साल भन्दा एक हप्ता अघिनै (मार्च २३/२४ बाटै) टोक्योमा साकुरा फुल्ने छ । मार्च को अन्त टोक्यो साकुरामय हुँदै छ । कतिले छुट्टी मिलाएर हानामी मनाउने सुर कसी सके होला । साकुरा मात्रै हेर्न पनि लाखौं पर्यटक आउने जापानमा, टोक्यो ओलम्पिक दुई(जेरो, दुई(जेरोको तयारीको बारे चाख राख्नेहरुको घुइचो पनि कम्ता छैन ।
मौसम न्यानो न्यानो हुँदै गर्दा हेइसेको अन्तीम बर्ष अर्थात राजा आकिहितोले आफ्नो शासन छोरालाई यसै बर्ष सुम्पिदै छ । ३१ बर्ष पछी जापानले नयाँ राजा पाउने छन् । जापान यो ३१ बर्ष केही प्राकृतिक बिपती आइ परे पनि हेइवा (शान्त) पूर्ण रह्यो भन्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । यो तीन दशक शान्तापूर्ण बनाउन जापान सरकार, जापानका नागरिकहरुले धेरै मेहनत र लगानी गरेको पाईन्छ । अझै गर्दै पनि छन् ।
हामी पनि जापान, नेपाल बनाउने काममै जुटेका छौ । काम घर, काम यस्तै उस्तै दैनिकी । मौसम परिवर्तन हुन्छ । आ, जाडो सुरु भो, हारु आयो । गर्मी शुरु भो नाचु । आकी आयो फेरी जाडो सुरु भो । हिउ ताइफु शुनामीको हल्ला । बेला बेलाको भुइचालोको हल्लाई । यस्तै यस्तै ।
बिदेश अध्ययन पछी स्वदेशमा त्यो ज्ञान प्रयोग गर्ने प्रयोग बिधिले अहिलेको जापान बनेको पाईन्छ । अनी अहिले महाशक्तीमान राष्ट्रको रुपमा उदाउँदै गरेको चाइनालाई पनि लिना सकिन्छ । पश्चिमा बिकास शैलीको प्रबेश सन् १८१० को दशकमा ब्यापक रुपमा भएको पाइन्छ जापानमा । जीवनको महत्वपूर्ण समय अर्थात युवा अवस्था स्वदेशमा बगाउनु पर्ने पशिना, बिदेशी भुमिमा बगाउदै पसिनालाई नगदमा परिणत त गर्दैछ जापानमा भएका नेपालीहरुले, के जापान र चाइनाको जस्तै बिकासमा टेवा पुर्याउने ज्ञान बटुलेको छ त हामीले ? अहिले ब्यतित् गर्दै गरेको जीवन सैली, बिकासको उच्तम उपभोगको एक छेउ पनि स्वदेशमा नहुँदा के होला भबिष्य ? २/४ बर्ष बस्ने हो, फर्किने हो आफ्नै देशमा । १ करोड कमाउने हो, जाने हो नेपाल । एजु चाँही लिउ, जाउला नि ? वास्तबमा नेपाल फर्किने भन्ने कहिले हो ? प्रश्न गर्छु साथीहरुलाई, म आँफैले आँफैलाई । वास्तबमा नेपालीहरु भिसा समस्या न आउन्जेल नेपाल फर्कने छाटकाट छैन । अनी नेपालमा उपयोग हुने अध्ययन ?
अध्ययनको लागि जापान आउने तथा जापान काम गर्न आउँदै गर्दाको कल्पना र यहाँको यथार्थता भोग्दा एक पटक त जस्तै सध्ये भन्नेहरुको नि हावा खुस्किन्छ । ट्रेनको सफर किन नहोस् । घरायसी सामानको प्रयोग, दैनिक जीवनमा उपभोग गर्ने बस्तुहरु, यहाँको काम गर्ने शैली, उपभोक्तालाई दिने सुबिधा, प्रत्यक पलको आइसाचु (सम्बोधन), बिमा तथा अन्य सुबिधा, अनी कर असुली । यो नेपालमा मै हुँ भन्ने परिवारले नभोगेको कुरा र नौलो कुरा हुन सक्छ । प्रबिधिको उच्चतम प्रयोग भएको जापानको जीवनशैली देख्दा सबै जना तीन छक खान्छन् । कति जना मेरो साथीहरु नेपाल न फर्केको गोटा ६-७ बर्ष नै भै सके । सानु दुदे नानी छोडेर आएका मित्रहरुको बालबच्चाले आइफोन डिमाण्ड गर्दै गर्दा नेपाल फर्कन चाँही किन नसकेको त ? उही हो उत्तर । इतर, बितर, तितर ।
यहाँ रहेको नेपालीहरुले राम्रो काम गरेर कमाइ जमाइ गरेर राम्रै मात्र गरेको छ कि समस्या पनि उब्जायको छ त ? यो प्रश्न स्वाभाबिकै रुपले उठ्छ । किनकी २०१९ अप्रिल इनटेकमा अध्ययन गर्न जापान आउन खोज्ने १ जना नेपालीले पनि अनुमती पाएन । टोक्यो इमिग्रेसनमा आबेदन गरेको नेपालीको रिजल्ट(Result) जेरो । टोक्यो इमिग्रेसन बाहेकबाट भने थोरै विद्यार्थीको सिइओ (CEO) झरेको छ । यसले के देखाउछ भने अहिलेसम्म जापान आएका नेपालीहरुको गती बिधी राम्रो भएन सङ्गै जापान र नेपाल बिचको सम्बन्ध पनि राष्ट्रिय रुपमा उपलब्धी मुलक हुन सकेन ।
नेपाल र जापान बिचको ब्यबसायिक तथा परराष्ट्र सम्बन्ध राम्रो नहुनु अनि महिनामा २ देखि ४ वटा सम्म केही न केही नेपाल र नेपाली सम्बन्धी खराब समाचारले जापानी संचारमा स्थान पाउनु । अनि के चाहियो ? अपराधिक गतिबिधी त अरु मुलुकको नेपालीको भन्दा बढी छ जापानमा । तर जनसङ्ख्याको आधारमा त थोरै भै कन नेपालीको यो खाले खराब गतीबिधी ? साच्चै जापान आएका अघिल्लो पिढिको खराब कर्मको कारण पनि हो अहिले धेरै विद्यार्थीहरुको भबिष्य अन्धकारमा परेको ।
जापानमा आइपुगेका नेपालीहरुको सङ्ख्या बढ्दै जाने क्रम सङ्गै बिभिन्न अपराधीक गतीबिधी पनि बढ्दै गरेको छ । २०१२ बाट १६,१७ सम्म विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी तथा कुक अनी कुकको परिवारहरु डिपेन्डेन् भिजामा जापान आउने सङ्ख्या उच्च रहयो भने त्यस पछी घट्दै गएको पाईन्छ । अहिले त टोक्यो लगायतको क्षेत्रहरुमा विद्यार्थी मात्र नभै कुकको पनि भिसा शुन्य नै रह्यो । जापान छिर्नै मात्र पाए हुने नियतले गर्दा जती भनेको उती पैसा फसाउने र यहाँ आएर बिना जापानी भाषा, कल्चरको अध्ययनले जापानमा जीवन यापन गर्न खोज्दा काम गर्ने ठाउँ, सरकारी कार्यालय, बैक, मोबाईल कम्पनी, क्रेडिट कार्ड प्रदायक कम्पनी, हस्पिटलहरुमा समस्या बढेको पाईन्छ ।
के के होला त कारण ?
विद्यार्थी भिसा रद्द् हुनुका केही प्राबिधिक तथा कागजी कारणहरु पनि छन् । बुँदागत रुपमा हेर्दा यस्ता समस्याहरु हुन नदिने भन्दा पनि भै रहेको र कतीपयको यस्तै समस्या हुँदाहुँदै पनि भिसा आई रहेको छ । कस्को दोस ? झट्ट भन्न नसके पनि अरु देशको इमिग्रेसनले भिसा रिजेक्ट हुनुको कारण भन्छ भन्दै न थाहा भएन तर जापान इमिग्रेसनले भिसा रिजेक्ट हुँदा दिने कारणहरु यस प्रकार छन ।
क) कागजात (Document) हरुको मेल नहुनुः बिशेषत विद्यार्थी भिसाको लागि इमिग्रेसनमा बुझाउने कागजातहरु मा शैक्षिक प्रमाण-पत्र, स्थानिय निकायको प्रमाण-पत्र, बैकको पेपर, यदी काम गरी रहेको छ भने यसको पत्र । यी प्रमाण-पत्र तथा कागजहरु बिच तादम्यता नहुँदा भिसा आबेदन रिजेक्ट हुने गरेको पाईन्छ । पत्रहरु पिच्छे अलग अलग नाम, ठेगाना, लोगो, जन्ममिति, नामको स्पेलिङ मिस्टेक, बैकका पेपरहरुको समस्या आदि ।
ख) अस्त बेस्त शैक्षिक क्यालेन्डरः विद्यार्थी भिसा आबेदन गर्दै गर्दा आफुले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको सस्थानको कागजात (Document)हरु पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त शैक्षिक सस्थाको शैक्षिक सत्र शुरु मिति, परिक्षा मिति, नतिजा प्रकाशन मिति र प्रमाण-पत्र प्रिन्ट मिति, सम्बन्धित ब्यक्तिको हस्ताक्षरहरुमा एकरुपता हुन नसक्दा सक्कली कागजात पनि नक्कली प्रमाणित भै दिएको घट्ना धेरै छ ।
ग) अस्तिर ब्यवस्थाः नेपालको परिवर्तन शिल ब्यबस्थाले कुनै एक ब्यक्तीको पद लामो समय टिक्ने कुनै टुङ्गो छैन । एउटै सेसन्को लागि आबेदन दिदै गर्दा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा अन्य कागजजातमा प्रमाणित गर्नेहरुको हस्ताक्षर अलग अलग हुने हुँदा पनि समस्या आउने गरेको पाइछ ।
घ) कन्सलटन्सी (Consultancy) हरुको लापारबाही पूर्ण कार्यशैलीः थोरै Consultancy हरु बाहेकले पैसा लिने र नक्कली (Duplicate) पेपर बनाउने गर्दछ । यसो गर्दा भिसा आए पनि पछी विद्यार्थीको थप अध्ययन तथा वोर्किङ भिसा बनाउने बेला समस्या आउने गर्दछ । सुरुको भिसा आबेदन र पछी आफुले बनाउने बायोडाटा (Bio-data) बिच मेल नखादा जापानमा वोर्किङ भिषा (Working Visa) बनाउन नसकी नेपाल फर्किनु पर्ने विद्यार्थीहरु धेरै छन् । यस्तोमा विद्यार्थीको पनि जिम्मेवारी उतिनै छ जती Consultancy को छ ।
ङ) कारणमा मेल नखानुः जापान अध्ययन गर्न जानु पर्ने कारण स्वदेशमा अध्ययन गरेको बिषय र पछी अध्ययन गर्ने भन्ने बिषय बिच मिल्नु पर्ने हुन्छ । अर्को कारण लेख्दा आफ्नो पढाइ ग्याप छ, भने त्यो ग्याप हुनुको कारण, यदी स्पोन्सर परिवारको सदस्यहरु बाहेक या अभिभाबक बाहेक कोही हो भने त्यसको पनि कारण खुलाएर लेख्ने गर्नु पर्छ । पहिला गएको स्टुडेन्टहरुकै रिडेमेड कारण कपि पेस्ट गर्दा मिस्टेकनै मिस्टेक हुन्छ ।
नेपालीहरुको मात्रै नभै श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बाङ्लादेश, म्यानमार आदी देशको भिसा समस्या पनि त्यस्तै छ । २०१७ सङ्गै जापानमा आउने बिदेशी विद्यार्थीहरुको समाचारले जापानको संचार जगतमा प्रमुख स्थान पायो । जापानमा गरेको बिभिन्न गैरकानुनी गतिबिधी, अपराधीक घट्ना, फेक शर्नार्थी आबेदन अनी सम्पर्क बिहिन हुने समस्या साथै अध्ययन भन्दा पनि कमाउनै जापान आउनेहरुको सङ्ख्या बढे पछी पैसाको लागि जे पनि गर्ने अवस्था देखियो । साथै नया समस्याको रुपमा २०२० मा हुने ओलम्पिकको सुरक्षा चिन्ता । हुन सक्ने आतङ्ककारी हमला लगायतलाई मध्यनजर राख्दै दक्षिण एसियाको विद्यार्थी भिषालाई कडा गरिएको होकी भन्ने आकलन पनि जानकारहरु गर्ने गर्छन् ।
रसुवामा घाटु नाच (फोटोफिचर)
रसुवाको उतरगया गाउँपालिका ३ ठुलो गाउँमा गुरुङ समुदायको परम्परागत सांस्कृतिक सति घाटु ...
विधेयक विरुद्ध आन्दोलन (फोटोफिचर)
मिडिया काउन्सिल विधेयक विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले शुक्रबार देशभर प्रदर्शन गरेको छ ...
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पदयात्रा र लोटस ल्यान्टन महोत्सव (फोटोफिचर/भिडियो)
दक्षिण कोरियामा हरेक बर्ष बुद्ध जयन्तीको अवसरमा हुँदै आएको अन्तर्रा्ष्ट्रिय शान्ति पदयात्रा ...
शैलुङ महोत्सवको रौनकता (फोटोफिचर/भिडियो)
बैशाख १४, २०७६
दोलखा र रामेछापको पर्यटकीय क्षेत्र शैलुङमा ३ दिने प्रथम शैलुङ महोत्सव शुक्रबारदेखि ...
साकुरासँग मनका कुरा (फोटोफिचर)
मौसम फूलैफूलको हो । बसन्त ऋतुमा सबै ठाउँमा फूलफुल्ने र मौसम परिर्वतन ...
बाइसधारा देखि जामाचाे हुँदै स्वयम्भू (फोटोफिचर )